Nhau - Iva akasimba muchinangwa chako, uye ramba uchikurudzira.
Yu Rucheng's 2021 semi-pagore musangano wepfupi wakaitwa mukukudza. Pasi pehutungamiriri hwemaneja maneja VaLiu Jianjun, ivo vepamusoro vebazi rekushambadzira vakauya pamwe nezviroto zvavo, vachidoma kushomeka kwebasa muhafu yekutanga yegore, uye kuronga marongero ekuzadzisa zvinangwa muhafu yepiri iro gore, uye nekupa kune "imba" yaYu Rucheng, uye ita kuti kurota kwacho kuzadzise. Ita kuti hwaro huwedzere kugara huri green.
Pakutanga kwemusangano, Li Sixian, director wedhipatimendi rekushambadzira mudzimba, uye Yang Wen, director wedhipatimendi rekushambadzira mhiri kwemakungwa, vakapfupisa mashandiro ebasa uye vakawana ruzivo muhafu yekutanga ya2021, uye vakatumira tarisiro uye kutungamira kwebasa mu hafu yepiri yegore. Shure kwaizvozvo, ivo vepamusoro vebazi rekushambadzira vakatorawo nhanho yekupfupisa uye kushuma nezvebasa ravo.
Tenda, enda kunze, uye simba rakajeka ndiwo akakosha mazwi emusangano uno wegore negore. Pamusangano, takasimbisa kuvimba kwedu mukuzadzisa zvinangwa zvedu kuburikidza nemavhidhiyo maviri. Isu takanzwisisawo basa rakakosha kuve nhengo yedhipatimendi rekushambadzira raYu Rucheng kuburikidza nenyaya yemabhizimusi uye zvinangwa zvekutanga zvemaneja mukuru VaLiu Jianjun.
Mumasikati, mukupindura kumatambudziko akakurukurwa nevashambadzi vepamusika, mutevedzeri wemaneja mukuru akatungamira munhu wese kuti aite timu yekuumba-inofamba-famba pamadziro chati chati. Wese munhu akatanga apatsanurwa muzvikwata kuti vakurukure vega. Mushure memakona mana ehurukuro nekutaurirana, mhedzisiro yenhaurirano yemunhu wese pamwe nekutenderwa zvakapfupiswa kuva mhinduro yedambudziko. Mukuita uku, munhu wese anga achishingairira, achigara achirovera, dzimwe nguva achiitisana nharo zvakanyanya, dzimwe nguva achigutsurira musoro mukucherechedzwa, uye pakupedzisira vakasvika mukubvumirana, uye pamwe chete vakasangana nerunako rwehuchenjeri hwechikwata pamwe nekugadzirwa.
Pakupera kwemusangano, VaLiu vakapedzisa hurukuro yavo: “2021 inopfuura hafu, uye zvinangwa zvedu zvehafu yepiri yegore zvinonetsa uye zvizere nezvinetso. Ndinotenda kuti munhu wese anonamira pane zvaanoita, kubudirira mukutengesa, kuramba akatendeka kuzvinangwa zvavo zvekutanga, uye kufambira mberi! ” Mumashoko, izwi rega rega nemutsara zvinokurudzira vese vashandi varipo. Isu tinotenda zvakasimba kuti mune rese ra2021, dhipatimendi rekushambadzira reYurucheng rinonyatso kuwana mhedzisiro iri nani.